Gadzira yako wega mimhanzi yekushambadzira sevhisi neMStream | Linux Vakapindwa muropa
Gadzira yako wega mimhanzi yekushambadzira sevhisi neMStream
ari mimhanzi yekufambisa masevhisi akawana mukurumbira wakawanda Munguva pfupi yakadai, vakavewo chimwe chezvinhu zvikuru izvo vashandisi vanoshandisa kunakidzwa nenziyo yavo yavanofarira, pamwe nevanozvisimudzira, kushambadzira kwavo kutsva kuburitswa, makonzati uye nezvimwe.
Tichifunga izvi, uyezve panguva imwe chete, iko kukura kuri kushandiswa kwemasevhisi gore kwatanga kuisa nzvimbo yekuchengetedza mimhanzi. Kunyangwe vasiri vese vashandisi vanozvifarira.
Kunyanya avo vanosheedza chikoro chekare kana isu vedu takakura tichiri kushandisa maCD atichiri kuchengeta kubva kune vatinofarira maartist.
Nhasi ndauya kuzotaura newe nezve chishandiso chakanakisa icho chingakubatsire nekutumira mimhanzi yako yakachengetwa uye kuti zvakare zvakare vachakuita iwe kuti udire guruva kubva kune izvo zvinyorwa izvo pane imwe nguva zvisina kumira kurega kutamba zvakapetwa zvakare.
1 Nezve mStream
2 Maitiro ekuisa mStream paLinux?
mStream ndeye yemahara uye yemuchinjikwa-chikuva mimhanzi yekushambadzira server izvo zvinokutendera iwe kuyananisa uye kuyerera mumhanzi pakati pemidziyo yako yese.
mStream Inosanganisira isingaremi mimhanzi yekushambadzira server yakanyorwa neNodeJS. Iwe unofanirwa kuishandisa kuendesa mimhanzi yako kubva pakombuta yako yekumba kuenda kune chero muchina, chero kupi.
Ichi chishandiso chinogona kumhanyisa pamaseva, pamwe nepamunhu makomputa uye zvigadzirwa zvinotakurika (mapiritsi, smartphone).
Kunoshandiswa zviwanikwa zvishoma
Kwayedzwa pamaraibhurari e-terabyte mazhinji
Zvirongwa zvekushandisa pawebhu
Tamba pasina kumbomira
Isa mafaera kuburikidza nefaira rekutsvagisa
Nharembozha app maficha
Inowanikwa paGoogle Play
Nyore enzanisa mimhanzi kufoni yako kuti isabvumirwe kutamba
Multi server server rutsigiro
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti mStream ndeye chaiyo server modhi iyo inouya neese kutsamira kwakagadzirirwa.
Usati waisa mStream, unogona kutarisa demo rewebhu rebasa pane iyi link inotevera. https://demo.mstream.io/
Maitiro ekuisa mStream paLinux?
Mhinduro yakapusa yekumisikidza mStream kuisirwa, pasina kusangana neyakavimbika, kurodha pasi yazvino vhezheni ye mStream kubva kune yayo yepamutemo webhusaiti.
Package inosanganisira yakawedzera seti yeUI maturusi uye sarudzo dzekuisa tray icon yeiri nyore server manejimendi, otomatiki server kutanga pane kutanga, uye GUI maturusi ekugadzirisa server.
Kuti utore uye uise iko kunyorera isu tinoshandisa iyo wget kuraira, nekuda kweizvi tichavhura terminal mune yedu system uye mairi tichaenda kunyora zvinotevera mairi.
Kutanga tichaenda kurodha pasi ne:
wget -c https://github.com/IrosTheBeggar/mStream/releases/download/3.9.1/mstreamExpress-linux-x64.zip
Waita kurodha pasi izvozvi isu tave kuzununura iyo package pamwe nemirairo:
Kana izvi zvangoitwa, isu tinenge tave kupinda mune inozadza dhairekitori neisina kuvharwa mafaera uye tigoita iyo yekuisirwa ne:
Imwe nzira yekuisa iyi application pane yedu sisitimu ndeyekuinyora kubva kune yayo kodhi kodhi.
Kune izvi isu tinofanirwa kuve neNodeJS uye npm rutsigiro mune yedu system. Mune terminal tinonyora zvinotevera:
git clone https://github.com/IrosTheBeggar/mStream.git
Uye zvaitwa nazvo Iye zvino tava kukwanisa kutanga kushandisa chishandiso ichi pamidziyo yedu.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kutanga iko kunyorera, mushure mekutanga ne mstream, iyo interface ye Kugadziriswa kweServer kucharatidzwa uye pano isu tinofanirwa kuisa sarudzo dzekumisikidza.
Pakati pezvisarudzo izvi tinofanirwa kugadzirisa dhairekitori iyo mimhanzi yatinoendesa kune mamwe madhizaini.
Pamusoro pekupa doko kune server uye kugadzira zita rekushandisa uye password. Pamusoro pezvo, mushandisi ane mukana wekugonesa iyo https sevhisi uko iyo interface inotipa mukana wekuwedzera ssl chitupa.
Pakupera kwekugadzirisa, ingotinya pane bhatani reBoot Server.
Chekupedzisira isu tinongofanirwa kuenda kukero http: // localhost: 3000 kana http: // IP-server: 3000 muwebhu browser kuti uwane sevhisi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Gadzira yako wega mimhanzi yekushambadzira sevhisi neMStream
Chinjanai chikamu paLinux. Maitiro ekuona saizi chaiyo
Ubuntu 19.04 Disco Dingo inopinda "Feature Freeze", iyo beta inosvika munaKurume 28